FIFA Oo Ku Dhawaaqday In La Jabsaday Xogteeda, Weerarro Badan Oo Internet-ka Ah Oo Ay La Kulantay Iyo Canaan Ay Jeedisay – Cadalool.com
FIFA Oo Ku Dhawaaqday In La Jabsaday Xogteeda, Weerarro Badan Oo Internet-ka Ah Oo Ay La Kulantay Iyo Canaan Ay Jeedisay
Xidhiidhka kubadda cagta Adduunka FIFA ayaa shaaciyey in oo dhacay oo la jabsaday xogteeda IT-ga horraantii sannadkan, isla markaana ay la kulmeen weerarro badan oo is-daba joog ah ka hor intii aanu qabsoomin koobka Adduunka.
Warbaahinta dunida qaarkeed ayaa tebisay in bishii March ee sannadkan la jabsaday xogta FIFA, hase yeeshee FBI-da Maraykanka ayaa horraantii bishan waxay sheegtay in weerarradaas ay fuliyeen sirdoonka Ruushka oo doonayey inay carqladeeyaan FIFA, sidoo kaena hore loogu eedeeyey, caddaymana loo hayo weerarro kale oo FIFA lala beegsaday sannadkii 2016 iyo sidoo kale xogo kale oo laga jabsaday guddiyada maamula ciyaaraha fudud.
“Waxa aanu cambaaraynaynaa isku-day kasta oo ka dhan ah sirta dhawrsoon, shararta iyo helitaanka macluumaadka. waxaanu ka walaacsanahay in qayb ka mid ah xogta si sharci darro ah loola baxay.” Sidaas waxa lagu yidhi bayaan kasoo baxay FIFA oo aan si gaar ah cidna loogu eedaynin.
FIFA waxa kale oo ay sheegtay inay isbeddel ku samaynayaan hannaanka computer-dadooda, dhaqaalena ay ugu talo-galayaan sidii horumar joogto ah loogu samayn lahaa qaabka loo ilaaliyo xogta ee ammaan looga dhigo.
Waxa kale oo FIFA ay sheegtay in bishii March ee 2018 ay dhaceen dhawr weerar, wixii ka dambeeyeyna horumar ay ku sameeyeen qaabka xogtooda ay u ilaaliyaan, si loo ilaaliyo shaqaalaha.